We.com.mm - တကယ်ဝိတ်ကျချင်တဲ့သူတွေ မဖြစ်မနေလိုက်နာရမဲ့ အချက် ၁၀ ချက်
ဝိတ်ကျချင်လို့ ငြီးငြီးနေကြတာ ခနခန ကြားဖူးတယ်။ မစားဘူးလုပ်ထားမှ ပိုစားမိသွားတယ်၊ စားချင်တာကို လည်းမစားရဘူး၊ ဘယ်လောက်စားစား မဝတဲ့ သူ ဖြစ်ချင်လိုက်တာ စသဖြင့်ပေါ့။ သူတို့ ငြီးနေတာတွေ ကြားရင် သတိထားမိတယ်။ တကယ်တော့ ဝိတ်ချချင်သူ အနေနဲ့ လိုနေတာက အစားသောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်နေနေ စားနေကျ အလေ့အကျင့်တွေကို ပြုပြင်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ အစားအသောက်အစီအစဉ် (Diet Plan) များကို မွေးမြူကျင့်သုံးဖို့ပါပဲ။ ဒါဆို ဘယ်လို အလေ့အထတွေကို အစားအသောက် အစီအစဉ်များကို လိုက်နာရမလဲ…?
ပထမဦးအနေနဲ့ သေးငယ်တဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းများက အရင်စတင်ပါ။ တစ်ဆင့်ချင်းစီလုပ်ပါ။ ချက်ချင်းကြီး မစားတော့တာမျိုး စားနေကျ အစီအစဉ်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ အစာအိမ် ရုတ်တရက် လုံးဝပြောင်းလဲသွားတဲ့ အကျင့်မျိုးကို လက်မခံနိုင်ပဲ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ ဒါ့အပြင် ချက်ချင်းကြီး မစားဘဲ မသောက်ဘဲနေမယ်လုပ်တော့ စိတ်ဖိစီးစေပြီး ပိုစားဖြစ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်လို့ပါ။
(၁) အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ မနက်စာကို စားပါ။
ဝိတ်ချချင်လို့ဆိုပြီးတော့ မနက်စာကို ရှောင်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ တစ်နေ့တာလုံးအတွက် မနက်စာက အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး မနက်စာမစားတဲ့အခါ နေ့လည်စာနဲ့ ညစာတွေကို ပိုစားမိပြီး ကျန်းမာရေးကို လည်းထိခိုက်စေပါတယ်။ နေ့လည်စာနဲ့ ညစာကို လျော့စားပါ။ တတ်နိုင်ရင်တော့ ညစာကို ရှောင်နိုင်အောင် တဆင့်ချင်းကြိုးစားနိုင်ရင်တော့ ပိုထိရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ညဘက်မှာ အသီးအနှံလေးပဲ စားတာဖြစ်ဖြစ် အရွက်ကြော်စားတာမျိုးဖြစ်ဖြစ် ပေါ့။
အိပ်ရေးမဝတဲ့အခါ ပင်ပန်းနွယ်နယ်မှုတွေကို ဖြစ်စေလွယ်ပြီး အစားပိုစားဖြစ်အောင် လှုံဆော်ပေးနိုင်လို့ပါ။
(၃) အစားစားတိုင်း နည်းနည်းချင်းစီ လျော့စားပါ။ ဥပမာ စားနေကျရဲ့ ၂၀ရာခိုင်နှုန်း ကို ဖယ်ပြီး စားတာမျိုးပေါ့။
(၄) ရေများများသောက်ပါ။ ရေသောက်ခြင်းဟာ ခန္တာကိုယ်က အဆီပိုတွေကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။
(၅)အဆီပါဝင်တဲ့ အစားအစာများ၊ အကြွပ်အရွများ( အထူးသဖြင့် အာလူးကြော်) ၊ အသင့်စားအစာများကို တတ်နိုင်သမျှ လျော့စားပါ။ ပြုတ်ထားသော ဟင်းလျာများကို ပိုစားပေးပါ။
(၆) ဒါ့အပြင် သကြားနဲ့ အချိုပါဝင်သော အစားအစာများ၊ အချိုရည်တွေ ကို လျော့သောက်ပါ။ အချိုဓာတ် တွေမှာ ကယ်လိုရီများစွာ ပိုပါဝင်နေပြီး ဝိတ်ပိုတတ်စေပါတယ်။
(၇) အသီးအနှံများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို တတ်နိုင်သလောက်များများ စားပေးပါ။ သဘာဝအသီးအနှံများဟာ အဆီကျစေပြီး အခြားဝိတ်တက်စေသော အစားအစာများနေရာမှာ အစားထိုးစားလိုက်တဲ့အတွက် အလေးချိန်လျော့ချစေနိုင်ရန် အထောက်အကူပေးပါတယ်။
(၈) Alcohol (အရက်)ပါဝင်သော သောက်စရာများကို လွန်စွာမသောက်သုံးမိပါစေနဲ့။ Alcohol မှာ ကယ်လိုရီများစွာပါဝင်ပြီး အဆီပိုတွေ ဖြစ်စေကာ ဝိတ်ပိုတက်စေပါတယ်။
(၉)ကြက်ဥစားလျှင်လည်း အနှစ်ကို ရှောင်ပါ။ အနှစ်မှာ ပရိုတင်းဓာတ်များ ပိုမိုပါဝင်ပြီး ဝိတ်ပိုတက်စေပါတယ်။
(၁၀)မှန်ကန်တဲ့ အစားအသောက်အစီအစဉ်ကို ပြင်ဆင်ထားပါ။ မနက်ပိုင်းအတွက် အာဟာရရှိအောင် အဆီလည်း အများကြီးမပါ အချိုဓာတ်တွေ အငန်ဓာတ်တွေလည်း များစွာမပါတဲ့ အစားအစာမျိုး၊ နေ့လည်ပိုင်းအတွက် ဘာတွေကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ပြီး ညစာအတွက် ဘယ်လို လျော့စားမယ်။ ဘာတွေကို အစားထိုး စားမယ် စသဖြင့်ပေါ့။ ကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် လျှောက်စားနေမိပြီး ပိုစားနေမိတာမျိုးကို ရှောင်ရှားပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။
သတိထားသင့်တာကတော့ ဝိတ်ကျရမယ်၊ဝိတ်ကျကို ကျရမယ်၊ မစားဘဲ နေနိုင်ရမယ်၊ လုံးဝမစားဘူး၊ စသဖြင့် ကိုယ့်ကို ကိုယ် တအား ဖိအားမပေးပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘက်က စွဲနေတဲ့ အကျင့်တွေ စားနေကျ အစားအစာတွေကို ချက်ချင်းကြီး ဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့ ခက်သလို အကျင့်တစ်ခု အလေ့အထတစ်ခုကိုလည်း လွယ်လွယ်ကူကူ မွေးမြူဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူးမို့လား။ နှေးနှေးနဲ့ ပုံမှန်လေး ကျင့်ယူသွားပေးပါ။ ဘယ်အရာမဆို အချိန်တစ်ခု ယူရတယ် မဟုတ်လား။
ကဲ တကယ်တော့ ဝိတ်အမြန်ကျဖို့ဆိုတာ မခက်ပါဘူး။ မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့အလေ့အထလေးများကို လိုက်နာဖို့ပဲလိုတာပါ။ တချို့တွေ တွေ့ဖူးတယ်။ ဝိတ်ချချင်လို့ အစားလုံးဝမစားဘဲ နေတာမျိုး အဆီကျစေတဲ့ ဆေးတွေကို အလွန်အကျွံသောက်တာမျိုး။ ဒါတွေဟာ ကျန်းမာရေးကို ပိုထိခိုက်စေပါတယ်။ ဝိတ်ကျသွားရင်တောင် မကျန်းမာတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပိန်သွားတာမျိုးပဲဖြစ်မှာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်လေး သွယ်လျနေဖို့က ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အလေ့ထလေးများကို ပိုလိုက်နာဖို့လိုတာပါ။ ဝိတ်ကျချင်တဲ့ သူတွေအနေနဲ့ အခုပြောသွားတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို လိုက်နာပြီး အလှတိုးကြပါစေ။
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အရသာရရှိအောင် ကြက်သားကိုပျားရည်နဲ့ ဘယ်လိုကြော်မလဲ?
ဆီးချိုဆေး Metformin အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
ဆီမပါဝင်တဲ့ အရမ်းလွယ်ကူဆုံး ကြက်သားပေါင်းနည်း
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Oreo Chocolate Popcake လေးတွေလုပ်စားကြည့်ရအောင်
သွားတွေဝါနေလို့စိတ်ညစ်နေရင် ဒီအချက် (၅) ချက်ကိုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ…။